विश्व Archives - NepalTrending
काठमाडौं । २० वर्ष लामो गृहयुद्धपछि सत्ता कब्जा गरेको तालिबानले अफगानिस्तानको काबुलस्थित राष्ट्रपति कार्यालय कब्जा गरेसँगै युद्ध सकिएको घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति असरफ घानी देश छोडेर भागेसँगै युद्ध सकिएको घोषणा भएको...	Read more »
काठमाडौं । अफगानिस्तान तालिबानको कब्जामा पुगेपछि देश छाड्नका लागि मानिसहरु आफ्नो ज्यानै जो,खिममा राख्न थालेका छन् । सोमबार आकाशमा उडिरहेको विमानबाट खसेर ३ जनाको मृ,त्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । सैन्य...	Read more »
काबुल विमानस्थलमा गो-ली चल्यो, कम्तिमा ५ जनाको मृ,त्यु !
एजेन्सी । अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलमा सोमबार अमेरिकी सेनाले गो,ली चलाएको छ । अमेरिकी सेनाको गो,ली लागेर कम्तिमा ५ जनाको मृ,त्यु भएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ । तालिबानले अफगानिस्तान क,ब्जा गरेपछि काबुल...	Read more »
विश्वमा को,भिड–१९ बाट मृ,त्यु हुनेको संख्या ४० लाख नाघ्यो !
एजेन्सी । विश्वमा को,भिड १९ बाट मृ,त्यु हुनेको संख्या ४० लाख नाघेको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ । यसमध्ये केवल तीन देशमा एक तिहाइभन्दा धेरैको ज्यान गएको छ । ६ लाख ६...	Read more »
फिलिपिन्समा विमान दुर्घ-टना हुँदा १७ सैनिकको मृ,त्यु !
NepalTrending — July 4, 2021 add comment
काठमाडौं । फिलिपिन्समा ८५ जना सबार सैनिक विमान दुर्घ-ट-ना-ग्र-स्त भएको छ। दक्षिणी फिलिपिन्समा भएको विमान दु-र्घ-ट-नामा हालसम्म १७ सैनिकको श-व भेटिएको समाचारमा उल्लेख छ। सेना प्रमुख सिरिलिटो सोबेजनाका अनुसार सी–१३०विमान सुलु प्रान्तको...	Read more »
ठुलो झट्का ! अब नेपालीले यूएई जान नपाउने
NepalTrending — July 3, 2021 add comment
अबुधावी । को,रोना भाइ,रसलाई कारण देखाउँदै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले आफ्ना नागरिकहरूलाई नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलंकालगायतका दक्षिण एसियाली देशमा यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । को,भिड–१९ महा,मा,रीका कारण गत महिनाको...	Read more »
Nepal Trending — June 24, 2021 add comment
एजेन्सी । दक्षिण अफ्रिकाकी एक जना महिलाले यसै महिनाको सुरुमा १० वटा बच्चा जन्माएको दाबी असत्य रहेको एउटा आधिकारिक अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ। खाउटेङ् प्रान्तका कुनै पनि अस्पतालमा त्यसरी बच्चा जन्मिएको अभिलेख...	Read more »
अफ्रिकी महिलाले राखिन् विश्व रेकर्ड ! एकैपटक दिईन १० बच्चालाई जन्म
Nepal Trending — June 9, 2021 add comment
प्रिटोरिया । दक्षिण अफ्रिकाकी एक महिलाले एकैपटकमा १० वटा बच्चालाई जन्म दिएर विश्व कीर्तिमान राखेकी छिन् । बीबीसीका अनुसार गोसियामी थामराले सात छोरा र तीन छोरीलाई जन्म दिएकी हुन् । ‘म धेरै...	Read more »
चीनमा अब देखि ३ जना सन्तान जन्माउन पाइने
Nepal Trending — May 31, 2021 add comment
काठमाडौं : चीनमा अब ३ जनासम्म सन्तान जन्माउन पाइने भएको छ । चीनले सोमबार देशका सबै दम्पतीलाई बढीमा ३ जनासम्म सन्तान जनमाउन दिइने घोषणा गरेको छ । संसारको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको...	Read more »